ဘာဘရာအင်္ကျီကို PDF အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / အင်္ကျီ / ဘာဘရာအင်္ကျီကို PDF အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
တစ်ပွင့်လင်းပြန် featuring တစ်ဦးအပြည့်အဝစီတန်းအင်ျကြီ Make. ထိုကဲ့သို့သောဝါဂွမ်းသို့မဟုတ် chiffon အဖြစ် Non-လမ်းပိုင်းပိတ်ထည်များအတွက်သင့်လျော်သော.
SKU: BaTuPDSePa categories: အင်္ကျီ, အမြိုးသမီးမြား Tags:: Jumper စားဆင်ယင်, နွေရာသီ, အင်ျကြီ, အမြိုးသမီးမြား
တစ်ပွင့်လင်းပြန် featuring တစ်ဦးအပြည့်အဝစီတန်းအင်ျကြီ Make. ထိုကဲ့သို့သောဝါဂွမ်းသို့မဟုတ် chiffon အဖြစ် Non-လမ်းပိုင်းပိတ်ထည်များအတွက်သင့်လျော်သော. The tunic reaches just above the knees and has an easy fit style.
Patterns comes in UK sizes4/6/ 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18. Please view ဇယား sizing to check your fit.
Copyshop အရွယ်အစား: 130cm x 103cm / A4 စာမကျြနှာ: 28 / အမေရိကန်ပေးစာ: 28
Lay the Back နှင့် Front interfacing onto the Wrong Side of the corresponding main garment pieces.
Lay Back နှင့် Front pieces Right Sides together.
Repeat from Step2– လှမ်း5for the lining pieces.
အဆိုပါဝယ်ယူ ဘာဘရာအင်္ကျီကို PDF အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ here
£ 1.38 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်